Miaramila mamo nanampatra fahefana: naiditra am-ponja ilay adjidà sefo nandrahona olona tamin’ny basy | NewsMada
Taorian’ny nisamborana azy, ny harivan’ny alahady teo, niakatra fampanoavana ary naiditra am- ponja vonjimaika avy hatrany ilay miaramila adjudant-chef mamo ary nandrahona sy nanambana mpivarotra tamin’ny basy poleta, teny Ambilanibe.
Voasambotra ny alahady hariva teny amin’ilay toeram-pisotroana eny Anosibe ihany ilay miaramila nihoa-pefy, nampihorohoro olona tao anatin’io toerana io ka naiditra am-ponja vonjimaika eny amin’ny tobin’ny miaramila. Araka ny nambaran’ny seraseran’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena, hohadihadina io miaramila io ary hatolotra ny fitsarana aorian’izay. Loharanom-baovao hafa kosa nanambara fa nesorina tamin-dralehilahy ny basiny ary natao famotorana ny tenany talohan’ny nampidirana azy tao anatin’ny fonja miaramila. Fantatra araka izany ny mombamomba io lehilahy io. Nohamafisiny fa miasa ao amin’ny BSP na Bataillon de Sécurité de la Primature izy io ary efa niasa tao amin’ny minisiteran’ny Paositra, ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny haikajy mirindra.
Niparitaka ny vaovao…
Nanaitra ny mpikirakira ny tambajotran-tserasera “Facebook” mihitsy ny fihetsik’ity lehilahy ity izay tao anaty trano fisotroana, tsy nanao fanamiana maha miaramila azy nefa nampihorohoro ny manodidina. Nampirisika ireo nanatri-maso naka sary sy horonantsary ny zava-nataony ka nozaraina ho hitan’ny besinimaro. Nisy mihitsy aza ny nangataka hanapariahana ny vaovao tao anatin’ireny vondrona maro samihafa ireny mba hahitana ny fihetsik’ireo mpitandro filaminana mihoa-pefy tsy mendrika ny “titre” ananany. Izy nantenaina handamina indray no manao ramatahora tamin’ny fitaovam-piadiany teny am-pelatanany sady mbola tsy nahafehy ny tenany taorian’ny fisotroana zava-mahamamo…